Itoobiya Oo shaaca ka qaaday waqtiga ay ku buuxineyso Biya xireenka An-Nahda. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Itoobiya Oo shaaca ka qaaday waqtiga ay ku buuxineyso Biya xireenka An-Nahda.
On Jun 27, 2020 336 0
War kasoo baxay xafiiska ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abey Axmed ayaa lagu sheegay in dowladdu ay laba todobaad gudahood ku buuxin doonto biya xireenka An-Nahda.
Warqad kasoo baxday xafiiska Abey Axmed ayaa si rasmi ah loogu shaaciyay go’aanka ay qaadatay dowladdda Itoobiya, waxayna meesha ka saartay inay jiraan caqabado dowladda Itoobiya ka hor istaagi kara arinkaas.
Go’aanka cusub ee dowladda Itoobiya wuxuu imaanayaa iyadoo dalalka Masar iyo Suudaan ay shaaca ka qaadeen in dowladda Itoobiya kula heshiiyeen inaaney billaabin biya ku shubida biya xireenka An-Nahda inta laga gaarayo heshiis saddex geesood ah.
Horay waxay Itoobiya u sheegtay in wax weliba oo dhaca aaney si naba uga laaban doonin mashruuceeda biya xireenka An-Nahda, iyadoona muujisay in milliterigeedu heegan buuxa ugu jira sidii uu isaga difaaci lahaa weerar weliba oo lagu soo qaado biya xireenka.
Saameynta biya xireenkan uu ku yeelan karo shucuubta Masaarida iyo Suudaan ayaa ah mid halis ah, waxaana aqoonyahannadu sheegayaan in haddii Itoobiya howlgeliso biya xireenka uu hoos u dhac ku imaan doono biya An-Niil ee gaara Masar iyo Suudaan.